Xisbiga WADDANI oo soo Dhaweeyay Masuulkii ugu Sarreeyay xukumada somaliland oo ku Biira – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Xisbiga WADDANI oo soo Dhaweeyay Masuulkii ugu Sarreeyay xukumada somaliland oo...
Xisbiga WADDANI oo soo Dhaweeyay Masuulkii ugu Sarreeyay xukumada somaliland oo ku Biira
Guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiillada Somaliland, mudane Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle, ayaa shalay si rasmiya u shaaciyay in uu ku biiray xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI, islamarkaana uu xisbigaasi uga tartami doono murashaxnimada xildhibaanimo golaha wakiilada ee gobolka Awdal.
Guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiillada Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle, ayaa ka baxay xisbul xaakimka KULMIYE, islamarkaana ku biiray xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI.
Munaasibad si balaadhan loo soo agaasimay isla markaana ujeedadeedu ahayd shaacinta ku biriista guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiiladda ee xisbiga WADDANI, ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin sar sare oo ka tirsan xisbigaasi, xildhibaano, sulaadiin, cuqaal, haween iyo culimada Ahlusuna Waljamaaca, iyo marti sharaf kale.
Xaflada xisbiga WADDANI u qabtay Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle, waxaa si weyn uga dhex muuqday culimada Qaadiriyada, isla markaana ku soo bandhigay qasaa’id kala duwan iyo Nabi AMaan fara badan, iyaga oo sheegay in xafladda Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle lixda gobol iyo Gabilayba ay goob joog ka yihiin.
Suldaan Ciise oo isagu ugu horayn goobtaas hadal ka jeediyay ayaa yidhi. “Dhammaan waxaa aanu u soo guurnay xisbiga WADDANI, ee Axmed Yaasin ku biiray, annaga oo ka soo guurnay xisbigii KULMIYE, waxaan leeyahay xisbiga WADDANI guul ayaa u soo hoyatay, xisbigii KULMIYENA guuldaro ayaa hadhaysay, Axmed Yaasin mar haddii uu ka soo guuray annaguna ma kala hadhno, Qaadiriyadii oo oodaheedii sidata waata kadinka inooga soo gaashay,”
Siyaasi ALLE barrio oo ka mida masuuliyiinta xisbiga WADDANI oo isna haddal kooban goobtaas ka jeediyay ayaa yidhi. “Waxaan ka markhaati ahay in annagu annaga oo labadayadu is hayna oo kala jeedna reer ahaana aanu isugu dhaw nahay, imikana in siyaasad ahaan isku xisbi noqonayno, waalina haygu ahaate waxaan u mahad naqayaa ciddii garan wayday waan u mahad celinayaa”
Xughayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI, Maxamed Faarax Cabdi, ayaa sheegay in ay u tahay maalin weyn oo ku suntan xisbiga WADDANI, soo dhaweynta guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiillada mudane Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle.“Maanta dhab ahaantii waa maalin weyn waana maalin ku suntan guusha xisbiga, waxaa aanu soo dhawaynaynaa mid ka mida siyaasiyiinta Somaliland haldoorkeeda, foolaadkeeda, oo ah Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle,”
Xughayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI, Cabdillaahi Jaamac Cismaan Geeljire, oo isna madashaasi shaacinta Axmed Yaasin ka hadlay ayaa yidhi. “Axmed Yaasin layaab muu lahayn ee wuxuu wax dadnimada iyo diintuba farayaan oo ah Muslimowna run sheeg, Muslimowna run uga qaado, balse muu moodayn in loo qaadayo balan aan jirin.
Xisbigan ayaanu kugu soo dhaweynaynaa guddoomiye, oo umadda reer Somaliland ay isugu timid, midbuse caan ku yahay, waa xisbi tallaabo hore looga qaado ee xisbi lagu aargoosto maaha ama cadho lala yimaado maaha, adigana taasi lagagama fadhiyo, Sheekhna waad tahay, hoggaamiyena waad tahay, dhallinyaro iyo waayeelba aad u tahay”
Murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI, Maxamed Cali Aw Cabdi, oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa yidhi. “Xertiina way joogta karaamo in uu la yimaado ILLAAHEY isku keen asturo, noqdana nin waddanka waxtara, xisbiga waxtara oo aanu ku hungoobin xisbigu, Axmed Yaasin wixii tagay waa laga hadlay oo ‘tagtay sheeko laga reeb, hadda ayay wax ina horyaalaan, soo dhawaw ayaan ku leeyahay addiga iyo taageerayaashaaduba”
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI, Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa yidhi. “Mabaadiida siyaasadu waa Qaranimada, Axmed Yaasin waxaa ka aaminsanahay in uu u soo guuray in Qaranku u guuro guri rays leh, in uu Qaranku guulaysto, waxaanu leenahay soo dhawaw, adiga iyo culimadaada iyo taageerayaashadduba soo dhawaada”
Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle waxaa uu ka hadlay waxaa shaqsiyan isaga mabda’a u ah waxaanu yidhi. “Runtii waxaan ku farax sanahay in maanta si rasmiya aan uga mid noqdo xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI.
Waxaa mabda ii ah in Qaranimada Somaliland lama taabtaan tahay, in umadda wadda jirkeeda iyo isku duubnideeda la ilaaliyo iyo maslaxada Qaranka Somaliland ay tahay waxa wax walba ugu horreeya, marka mabda noocaas ah ciddi ayidaba walaal ayaan la ahay, tartankuna waa xalaal.
Waxaan aad ugu mahad naqaya madaxweynaha Somaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi, oo dhab ahaantii ah nin aanu in badan soo wada shaqeynay, oo ah nin abaal igashaday ana abaal aan gashaday, mahad ayaan u celinayaa xaashalilaah ma cadhaysni, waxaa la yidhi nin Habari dhashay hal ma seegi waayo ilduufkuna wuu dhacaa, Jamaahiirta halkan fadhida haddii uu ilduufay bini’aadam ayuu u yahay in qalad qofku geli karro, kumase haysano uguma cadhoonayno ee waanu ugu mahad naqaynaa abaalna waanu u haynaa.
Umadda reer Somaliland waxaa ay leedahay Qarankan Jamhuuriyadda Somaliland, kuna yimid rabitaan shacab, awooda ugu weyn ee dalkani leeyahay waa shacabka Somaliland,”
Guddoomiye Axmed Yaasin waxaa uu si gaara fariimo kala duwan ugu diray, madaxweynaha Somaliland, asxaabta saddexda xisbi Qaran iyo guddida doorashooyinka Qaranka Somaliland, waxaanu yidhi. “Madaxweynaha midbaan leeyahay, asxaabta Qarankana midbaan leeyahay, guddida doorashooyinka Qarankana midbaan leeyahay.
Madaxweynaha anoo u mahad naqaya go’aankiisi doorashada uu ka qaatay sida uu ugu dhiiraday in uu doorashadii qabto, waxaan madaxweyne kaaga tagayaa in aanad maqal casaabadaha had iyo jeer madaxda ku wareegsan, ee khaasatan madaxda Afrikanka ah waxaan jirin oo aan xaqiiqo ahayn u sheega, berri ayay ku odhan doonaan xisbil xaakim ayaynu nahay dawladd Afrikan ah ayaynu nahay, sidee ayaynu aqlabiyad u waayaynaa? Waxaa ha dhageysan madaxweyne, haddii aad taa dhagaysato Qaranku meel xun ayuu innaga galayaa.
Waxaa dalkeenu ku dhisan yahay doorashooyin xor ah oo xalaal ah, waxaa uu madaxweyne Siilaanyo 80-cod ugu aqbalay kursiga uu kaga tago, doorasho xor iyo xalaal ah, haddii Daahir wax is dabamarinlaha Siilaanyo ma aqbaleen.
Guddida doorashooyinkana waxaan leeyahay, waxaad tihiin maanta guddidii doorashooyinka Qaranka, sidaad doontaanba aad ku timaadaane, tanaasul badan oo Qarankani maanta hore ugu socdo ayaad ku tihiin maanta guddida doorashooyinka Qaranka, saddexda xisbina kalsooni idinku siiyeen, dhaarna waad marten umaddan kitaab ayaad gacanta u saarteen, amaanada umadda reer Somaliland maanta gacantiina ayay ku jirta, waxaa u aasaas ah in Qarankani halkaas ku soo gaadhana waa rabitaanka shacabka Somaliland, ILLAAHEY ayaa amaanada idin saaray,
codka qofku leeyahay in aad u xafidaan qofkii xaqa u lahaana u tirisaan ayaad ILLAAHEY hortii Qiyaamaha ku badbaadaysaan.
Asxaabta midbaan leeyahay, doorashadu waxaa ay ka guntantaa waa goobta laga coddaynayo, goobahaasi waa in ay ammaan ahaadaan, goobahaasi natiijada ka soo baxda waa in mid lagu kalsoonaan karro noqotaa, asxaabta Qaranka waxaa u yaala in inamada muraaqibiinta noqonaya masaarifta la siiyo lagu qiimeeyo, balse muraaqibiin mabaadii aaminsan, Qaranka aaminsan, masuuliyada saarana aaminsan, taas ayaan ku waaninayaa asxaabta Qaranka.”
Previous articleTirada Dad lagu Eedeeyay faafinta Diinta Kiristaanka oo Ciidammada Boolisku ku Xidheen Magaalada Hargeysa
Next articleSida uu Nebigeennu (SCW) u isticmaalay xisaabta markii uu galayay dagaalkii Badar?
Degdeg:Qarax Gaari Oo Caawa Muqdisho Ka dhacay
Faah Faahin Dagaal Khasaaro Geystay Oo Ka Dhacay Gobolka Sh/Hoose